Sivivinye amakhadibhodi weqiniso we-AT & T | Izindaba zamagajethi
UPablo Ortega | | General, Iqiniso langempela, Izibuyekezo, Ubuchwepheshe
I-AT & T iyinkampani yakamuva yokujoyina umkhuba ongokoqobo futhi lokhu kukhuthazwe yisixazululo seGoogle. U-opharetha wezingcingo wase-US usethuthukile izibuko ezingokoqobo ezingabizi kakhulu ezenziwe ngekhadibhodi nokuthi singayisebenzisa nama-smartphones ethu ajwayelekile. Intengo ibhokisi kuphela Amadola ka-10 (eshibhile kancane kune-Google Cardboards).
Futhi kungani inkampani efana ne-AT & T inqume ukungena emhlabeni weqiniso langempela? Ngomkhankaso we "It Can Wait", ohlose ukuqwashisa phakathi abashayeli ngakho ababheki izingcingo ngenkathi ngemuva kwesondo. I-AT & T ithuthukise uhlelo lokusebenza, oluhambisana ngokuphelele neqiniso elingokoqobo, olusibeka ezicathulweni zomshayeli ongenzi lutho ngaphandle kokuziphazamisa ngemuva kwesondo.
Lolu hlelo lokusebenza, olubizwa nge- "It Can Wait", luyatholakala kokubili Isitolo se-Google Play njengase- Isitolo se-Apple App, ngokuphelele mahhala. Ngesikhathi se- Isipiliyoni se-3D, okungenzeka sibonga amakhadibhodi ayi- $ 10, siyabona ukuthi sesizoshayisana kaningana noma size sigijime ngaphezu kwabahamba ngezinyawo ngenxa yocingo. Abanye abanye abashayeli bazozizwa behlotshaniswa nalezi zinhlobo zezimo uma bake babhekana nokwesaba esondweni.
Idemo isimema ukuthi sihambise amakhanda ethu ngezindlela ezahlukahlukene, sihlole imvelo, kepha ngeke sibe namandla okuphatha ukushayela nganoma yisiphi isikhathi. I- isipiliyoni "sicwilisa" ekugcineni sizobona ukuthi isekhondi elilodwa lokuphazamiseka ngenxa yocingo lingaba nomphumela obulalayo. Imoto izofika ngenye indlela isigijime.
1 Isebenza Kanjani i-AT & T Virtual Reality Cardboard
2 Konke Okuyiqiniso Kwamakhadibhodi we-AT & T
Isebenza Kanjani i-AT & T Virtual Reality Cardboard
Ibhokisi lamakhadibhodi le-AT & T liza lihlanganiswe cishe futhi nomsebenzisi ngeke kudingeke ulandele imiyalo eyinkimbinkimbi ukwethula lolu hlelo olungokoqobo olulula.
Ibhokisi singalibamba ngesinye sezandla noma singanamathisela iribhoni. Kunoma ikuphi kuzoba lula futhi kusheshe lungisa izinga lokujula emehlweni nezidingo zethu. Qiniseka ukuthi ukukwenza kahle ukugwema isiyezi esingaba khona (empeleni esingamukelekile).
Ikhadibhodi isebenza cishe nganoma iyiphi i-smartphone yamanje, ezosebenza njengesikrini. Sikwazile ukuwahlola nge-iPhone 6, i-iPhone 5, i-Samsung Galaxy S6, i-Samsung Galaxy S6 Active futhi saze salokotha nokuzama ifoni enkulu, njenge-iPhone 6 Plus, enesikrini 5,5 amayintshi futhi ingena ecaleni ngaphandle kwezinkinga. Vele, sincoma ukuthi ubheke kahle uma ichopho lebhokisi lilungisiwe futhi liqinile, ukuvimbela ifoni ukuthi ishelele kolunye uhlangothi.
Elinye iqiniso elinelukuluku mayelana Amakhadibhodi we-AT & T ukuthi sikwazi ukuxhuma amahedfoni, uma siwadinga.
Konke Okuyiqiniso Kwamakhadibhodi we-AT & T
Amakhadibhodi e-AT & T aklanyelwanga nje kuphela ukuthi sikwazi ukuphila lesi sipiliyoni ngemuva kwesondo, kodwa kunjalo iyahambisana nazo zonke izinhlobo zezinto ezibonakalayo ezingokoqobo.
Enye yezinto ezaziwa kakhulu yi- «i-virtual coaster roller coaster«, Esingazithola ezitolo zohlelo lokusebenza ze Apple futhi of -Google Mahhala. «I-Roller Coaster VR»Kusifaka ngokuphelele ekukhangeni okubonakala sengathi kuhamba kancane ekuqaleni, kepha lokho kuzobeka ibhalansi yethu esivivinyweni kuma-descents, lapho imoto yethu iqala ukushesha. Kungakho sincoma ukuthi noma yisiphi isipiliyoni sangempela sangempela senziwe lapho umsebenzisi ehleli. Le adventure futhi isimema ukuthi sihambise amakhanda ethu kolunye uhlangothi siye kolunye futhi ungikholwe lapho ngikutshela ukuthi isisu sakho sizokunika okungaphezu kokugxuma.
Olunye uhlelo lokwazi esikwazile ukuluthola - futhi mahhala - lusiyisa kufayela le- umhlaba we-jurassic onama-dinosaurs ambalwa. Ku- "Jurassic Virtual Reality" sizoba namandla athe xaxa okuxhumana, ngoba isikhundla sekhanda lethu sizosiza umlingiswa akwazi ukuzijwayeza yena. Ngakho-ke, sizoba namandla okuhambahamba, okwenza isipiliyoni sibe mnandi kakhulu, ikakhulukazi lapho siqala ukuhlangana nama-dinosaurs. Futhi singazola, ngoba kubonakala sengathi lezi zidalwa zondlekile kahle ngoba ngeke zisihlasele nganoma yisiphi isikhathi. Iyatholakala kufayela le- iPhone namadivayisi Android.
Uma ufuna ukuqala ukuzama iqiniso elingokoqobo futhi ungasebenzisi imali eningi uzama, wena Sikukhuthaza ukuthi uzame amakhadibhodi we-AT & T, ongayithenga nge- "Ingalinda" iwebhusayithi yomkhankaso. Ungasebenzisa futhi uhlelo lokusebenza lwangempela lwe-AT & T nge-Google Cardboards.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ubuchwepheshe » Iqiniso langempela » Sivivinye amakhadibhodi weqiniso we-AT & T